Kuqolwa abantu ngamathuba omsebenzi – Bayede News
Kuqolwa abantu ngamathuba omsebenzi
UKUNTULEKA kwemisebenzi ezindaweni ezakhelene neDundee sekudale
by Bayede-News Posted on 1 November 2018
UKUNTULEKA kwemisebenzi ezindaweni ezakhelene neDundee sekudale ukudlanga kobugebengu namaqola asebenzisa usizi lomphakathi ukuzicebisa.
Lama qola asebenzisa izinkundla zokuxhumana ukulutha abantu ngemisebenzi abathi ikhangiswa yinkampani maqede bawutshele ukuthi kunemali okudingeka ukuba uyifake.
Imayini iBuffalo Coal eseDundee ngenye yezinkampani okuthiwa amaqola asebenzisa igama layo ukuthembisa abantu imisebenzi engekho.Kuthiwa lamaqola aphume umkhankaso wokuqola abantu ngokuthi abathembise umsebenzi emayini iBuffalo Coal, eseDundee, eNyakatho, neKwaZulu-Natal.
Ngokusho kweMeneja yale mayini uMnuz Kevern Mattison amaqola akhangisa ezinkundleni zokukuxhumana aphinde abhale nama emails akhangisa ngemisebenzi ekhona kule mayini. Uqhuba uthi ngaphezu kwalokhu babe sebetshela abantu ukuthi kudingeka bafake imali ethize ukuthi bakwazi ukuthola le misebenzi esuke ikhona.
UMattison weluleke umphakathi ngokuthi inkampani yabo okuyiBuffalo ayiyithathi imali kubantu uma iqasha kodwa umuntu uqashwa ngamakhono anawo ,kanye nolwazi lomsebenzi.
“Kumanje abasebenzi bethu bathola izinsongo zokubulawa kanye nokwesatshiswa ngoba lezi zigilamkhuba zibatshela ukuthi abakhiphe imali ukuze bathole umsebenzi, bese zithi abaxhumane nabasebenzayo kule nkampani babanikeze namagama abo,” kusho uMnuz uMattison eqhuba ethi laba basebenzi okuthiwa akuxhunyanwe nabo sebethuka izanya ngenxa yalezi zigilamkhuba.
Wazise iBAYEDE ukuthi abantu kumele bazi futhi bakuqonde ukuthi awukho umsebenzi okhona nodayiswayo kule mayini.
Uchaze abenza lokhu njengamaqili aphume umkhankaso wokuqola abantu okungahlangene nemayini yabo.
Uxwayise umphakathi ngokuthi ungavumi ukusetshenziswa yilezi zigebengu ngoba akukho lapho kwake kwathiwa kumele kukhishwe imali kuqala ngaphambi kokuthi umuntu athole umsebenzi.
Omunye wabasebenzi ongathandanga ukuba igama lakhe lidalulwe utshele leli phephandaba ukuthi yena useke wavakashelwa ngisho nasekhaya yilaba bantu asebegwazile kulezi zigilamkhuba bezomfuna umsebenzi noma imali abadize ngayo.
“Thina esisebenza kule nkampani sesihlala sithuka izanya ngoba asazi ukuthi laba bantu abaqoliwe bakuphi nokuthi njengoba beqolwe imali yabo bangenza noma yini,” kusho lo msebenzi. Uthe okubuhlungu ukuthi kusetshenziswa amagama abo kulobu bugebengu ngento bona abangayazi.